Ukulungelelaniswa NgeLizwi LikaThixo | Efundwayo
“UYehova wawuseka umhlaba ngobulumko. Wawazinzisa ngokuqinileyo amazulu ngokuqonda.”—IMIZE. 3:19.
IINGOMA: 105, 107
Yintoni ekwenza uqiniseke ukuba uYehova ulichule lokulungelelanisa?
Kutheni kufanelekile ukucinga ukuba abakhonzi bakaYehova bamele balungelelaniswe?
ILizwi likaThixo lisinceda njani sihlale sicocekile, siseluxolweni yaye simanyene?
1, 2. (a) Bathini abanye xa kusithiwa uThixo umele abe nentlangano yakhe? (b) Siza kuthetha ngantoni kweli nqaku?
NGABA uThixo unentlangano yakhe? Abanye basenokuthi: “Akukho mfuneko yentlangano yokukhokela abantu. Umntu kufuneka nje abe ngumhlobo osenyongweni kaThixo.” Kuchanile ukucinga ngolo hlobo? Zibonisa ntoni izibakala?
2 Kweli nqaku, siza kuthetha ngobungqina obubonisa ukuba uYehova, uThixo onocwangco, ulichule lokulungelelanisa. Siza kubona noko simele sikwenze xa sifumana ulwalathiso kwintlangano kaYehova. (1 Kor. 14:33, 40) Ngenkulungwane yokuqala yeXesha Eliqhelekileyo nangemihla yethu, iZibhalo zincede intlangano kaYehova esemhlabeni ukuba yenze umsebenzi omkhulu wokushumayela iindaba ezilungileyo. Ngenxa yokuba sisenza kanye oko kuseBhayibhileni kwaye silandela ulwalathiso lwentlangano, sifak’ isandla ekugcineni ibandla lonke licocekile, liseluxolweni yaye limanyene.
UYEHOVA LICHULE LOKULUNGELELANISA
3. Yintoni ekwenza uqiniseke ukuba uYehova ulichule lokulungelelanisa?
3 Indalo ingqina ukuba uThixo ulichule lokulungelelanisa. IBhayibhile ithi: “UYehova wawuseka umhlaba ngobulumko. Wawazinzisa ngokuqinileyo amazulu ngokuqonda.” (IMize. 3:19) Thina sazi nje ‘imiphetho yeendlela’ zikaThixo yaye “kukusebeza kuphela okuviweyo kuvela kuye.” (Yobhi 26:14) Kodwa ke, okuncinane esikwaziyo ngeeplanethi neenkwenkwezi kusenza sivume ukuba ezi zinto zilungelelaniswe ngendlela emangalisayo. (INdu. 8:3, 4) Kukho izigidi zeenkwenkwezi ezihamba esibhakabhakeni zilungelelene. Umhlaba nenyanga zijikeleza ilanga kakuhle ngokungathi zithobela imithetho yendlela. Ukulungelelana okukhwankqisayo kwendalo kusinceda sibone ukuba sifanele simdumise, sithembeke kuye size simnqule uYehova, ‘owenza amazulu nomhlaba ngokuqonda.’—INdu. 136:1, 5-9.
4. Kutheni oososayensi bengakwazanga ukuyiphendula imibuzo emininzi?
4 Isayensi isincede sazi izinto ezininzi ngendalo, kuquka umhlaba, ibe ibenze balula ubomi. Kodwa isayensi inemibuzo emininzi engakwazanga ukuyiphendula. Ngokomzekelo, izazi ngeenkwenkwezi azikwazi ukusichazela ukuba indalo ivela phi okanye kutheni sikulo mhlaba unentabalala yezinto eziphilayo. Ngaphezu koko, abantu abakwazi ukucacisa isizathu sokuba sikufuna kangaka ukuphila ngonaphakade. (INtshu. 3:11) Kutheni le mibuzo ibalulekileyo bengakwazi ukuyiphendula? Esinye sezizathu kukuba oososayensi nabanye abantu abakhuthazi ukucinga ngendlela kaThixo ibe bathi izinto zazivelela. Esebenzisa iBhayibhile, uYehova yena uye wayiphendula imibuzo abanayo bonke abantu.
5. Sixhomekeke njani kwimithetho yendalo?
5 Sixhomekeke kwimithetho yendalo engatshintshiyo nenokuthenjwa eyamiselwa nguYehova. Abantu abasebenza ngombane, ngemibhobho yamanzi, iinjineli, abaqhubi beenqwelo-moya noogqirha, bonke baxhomekeke kule mithetho ukuze benze umsebenzi wabo. Ngokomzekelo, oogqirha bancedwa kukwazi ukuba umzimba womntu wenziwe ngendlela efanayo engatshintshiyo. Ngenxa yoko, akuye kufuneke babe beyikhangela intliziyo yesigulana ukuba iphi. Sonke siyiqonda kakuhle imithetho yendalo. Siyazi ukuba xa sinokutsiba emthini sizame ukubhabha njengentaka, siza kwenzakala!
6. Kutheni sinokulindela ukuba abakhonzi bakaYehova balungelelane?
6 Ngokwenene indalo ilungelelaniswe ngendlela emangalisayo. Ngoko sinokulindela ukuba uYehova afune ukuba abakhonzi bakhe balungelelaniswe kakuhle. Ngenxa yoko, uThixo uye wasinika iBhayibhile ukuze isalathise. Ukuba sinokuphila ngaphandle koncedo lwentlangano kaThixo nemilinganiselo yakhe, soze sonwabe.
7. Yintoni ebonisa ukuba iBhayibhile yincwadi elungeleleneyo?
7 IBhayibhile asiyongqokelela nje yeencwadi ezingadibaniyo zamaYuda namaKristu. Kunoko, yincwadi elungelelaniswe kakuhle, umsebenzi wobuchule ophefumlelweyo. Iincwadi zeBhayibhile ziyadibana. Ithetha ngento enye ukususela kwiGenesis ukusa kwiSityhilelo, ukuthethelelwa kwelungelo likaYehova lokulawula nokuzaliseka kwenjongo yakhe ngomhlaba esebenzisa uBukumkani obulawulwa nguKristu, ‘imbewu’ ethenjisiweyo.—Funda iGenesis 3:15; uMateyu 6:10; neSityhilelo 11:15.
8. Kutheni sinokuthi amaSirayeli ayelungelelene?
8 Abantu bakwaSirayeli wamandulo babengumzekelo wolungelelwano. Ngokomzekelo, ngokoMthetho kaMoses, kwakukho ‘izicakakazi ezazikhonza [ezazilungelelaniswe] emnyangweni wentente yokuhlangana.’ (Eks. 38:8) Inkampu yamaSirayeli nomnquba zazithuthwa ngendlela elungeleleneyo. Kamva, uKumkani uDavide walungelelanisa abaLevi nababingeleli baba ngamaqela asebenza kakuhle. (1 Kron. 23:1-6; 24:1-3) Xa ethobela uYehova, amaSirayeli ayelungelelana, abe seluxolweni aze amanyane.—Dut. 11:26, 27; 28:1-14.
9. Yintoni ebonisa ukuba ibandla lamaKristu lenkulugwane yokuqala lalilungelelanisiwe?
9 Ibandla lamaKristu lenkulungwane yokuqala lalilungelelanisiwe ibe lincedwa lulwalathiso oluvela kwiqumrhu elilawulayo, ekuqaleni elalingabapostile. (IZe. 6:1-6) Kamva, kongezwa abazalwana abangakumbi kwelo qumrhu. (IZe. 15:6) Iziluleko nemiyalelo zazidluliselwa ngeeleta eziphefumlelweyo ezibhalwe ngamadoda akwiqumrhu elilawulayo okanye amanye asondeleyo kulo. (1 Tim. 3:1-13; Tito 1:5-9) Amabandla ayencedwa njani kukuthobela ulwalathiso oluvela kwiqumrhu elilawulayo?
10. Kwenzeka ntoni xa amabandla amandulo enza ngokwemimiselo ekwakugqitywe kuyo liqumrhu elilawulayo? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
10 Funda iZenzo 16:4, 5.Abazalwana abahambahambayo bethunywe liqumrhu elilawulayo babegqithisa ‘imimiselo ekwakugqitywe kuyo ngabapostile namadoda amakhulu awayeseYerusalem.’ Njengoko amabandla ayesenza ngokwaloo mimiselo, “aqhubeka eqiniswa elukholweni yaye esanda ngenani imihla ngemihla.” Ikho na into esinokuyifunda kule ngxelo yeBhayibhile enokusinceda kwintlangano kaThixo kule mihla yethu?
UYALUTHOBELA NA ULWALATHISO?
11. Amadoda akhokelayo afanele enze ntoni xa efumana ulwalathiso kwintlangano kaThixo?
11 Yintoni efanele yenziwe yiKomiti Yesebe okanye Yelizwe, abaveleli beziphaluka nabadala bebandla xa befumana ulwalathiso kwintlangano kaThixo? IBhayibhile iyalela ukuba sonke sithobele. (Dut. 30:16; Heb. 13:7, 17) Umntu othanda ukugxeka okanye ukuvukela akanandawo kwintlangano kaThixo kuba unokuluphazamisa uxolo, uthando nomanyano ebandleni. Kakade ke, akakho umKristu othembekileyo onokufuna ukungabi nambeko okanye ukuvukela njengoDiyotrefe. (Funda eyesi-3 kaYohane 9, 10.) Khawuzibuze: ‘Ngaba ndinegalelo elihle kwindlela abakhonza ngayo abo bandingqongileyo? Ndiyakhawuleza na ukwamkela nokuxhasa ulwalathiso lwabazalwana abakhokelayo?’
12. Yintoni etshintshileyo kwindlela abamiselwa ngayo abadala nezicaka zolungiselelo?
12 Cinga nje ngesigqibo sakutshanje esenziwe liQumrhu Elilawulayo. “Imibuzo Evela Kubafundi” kwiMboniselo kaNovemba 15, 2014, icacise ngotshintsho olwenziweyo kwindlela abamiselwa ngayo abadala nezicaka zolungiselelo. Eli nqaku libonise ukuba iqumrhu elilawulayo lenkulungwane yokuqala lavumela abaveleli abahambahambayo ukuba babamisele ngokwabo abadala nezicaka zolungiselelo. Ngokuvisisana noku, ukususela ngoSeptemba 1, 2014, abadala nezicaka zolungiselelo bebemiselwa ngabaveleli beziphaluka. Umveleli wesiphaluka uye azame ukubazi ngakumbi abazalwana abanconyelweyo aze ashumayele nabo ukuba kunokwenzeka. Uye ajonge neentsapho zabo. (1 Tim. 3:4, 5) Iqumrhu labadala nomveleli wesiphaluka baye bajonge kwiZibhalo ukuba izicaka zolungiselelo nabadala bafanele babe ngabantu abanjani.—1 Tim. 3:1-10, 12, 13; 1 Pet. 5:1-3.
13. Sinokuluxhasa njani ulwalathiso lwabadala?
13 Kufuneka sithobele ulwalathiso olusekelwe eBhayibhileni esilufumana kubadala. Aba balusi bathembekileyo bakwintlangano kaThixo bakhokelwa yimiyalelo ‘ephilileyo’ efumaneka eBhayibhileni. (1 Tim. 6:3) Khumbula oko kwathethwa nguPawulos ngabo bangalawulekiyo ebandleni. Abanye ebandleni ‘babengasebenzi konke konke kodwa begxuphuleka koko kungafuni bona.’ Kuyabonakala ukuba babelulekiwe ngabadala kodwa baqhubeka bevukela. Laliza kubathini ibandla abantu abanjalo? UPawulos wayalela wathi: “Mphawuleni onjalo, ninganxulumani naye.” Kodwa ke, wabalumkisa ukuba umntu onjalo angaphathwa njengotshaba. (2 Tes. 3:11-15) Kule mihla, umdala unokunikela intetho elumkisa ngomntu oqhubeka esenza into eyenza lijongwe kakubi ibandla, njengokuthandana nomntu ongengomKristu. (1 Kor. 7:39) Uye uthini xa abadala kuye kufuneke banikele intetho enjalo? Ukuba unolwazi ngemeko echazwe kule ntetho, ngaba uya kukulumkela ukuhlobana nomntu onjalo? Ukuxhalaba kwakho kuba umthanda nokuma uqinile kunokumnceda loo mntu ayishiye indlela yakhe engalunganga. 
GCINA IBANDLA LICOCEKILE, LISELUXOLWENI YAYE LIMANYENE
14. Sinokuncedisa njani ekugcineni ibandla licocekile?
14 Sinokuncedisa ekugcineni ibandla linobuhlobo obuhle noThixo ngokuthobela ulwalathiso oluseBhayibhileni. Cinga ngoko kwenzeka kwibandla laseKorinte. UPawulos wayezilahlele nofele eshumayela kweso sixeko yaye wayebathanda abo “bangcwele” balapho. (1 Kor. 1:1, 2) Kodwa inokuba wayebuhlungu xa kwafuneka abaluleke ngokunyamezela kwabo ukuziphatha kakubi kwelo bandla. UPawulos wayalela abadala balo ukuba umntu oziphethe kakubi anikelwe kuSathana, bamsuse kubudlelane. Ukuze ibandla lihlale licocekile, abadala kwakufuneka balisuse “igwele.” (1 Kor. 5:1, 5-7, 12) Xa sixhasa isigqibo sabadala sokumsusa kubudlelane umntu ongaguqukiyo, sincedisa ekugcineni ibandla licocekile yaye mhlawumbi siya kunceda naloo mntu aguquke aze afune ukuxolelwa nguYehova.
15. Sinokulugcina njani uxolo ebandleni?
15 Kwakukho nenye ingxaki eKorinte. Abanye abazalwana babemangalelana ezinkundleni. UPawulos wababuza oku: “Kutheni kunoko ningaziyekeli nenziwe ububi?” (1 Kor. 6:1-8) Kuye kwenzeka okufanayo nakwimihla yethu. Maxa wambi, uxolo phakathi kwabazalwana luye lwaphazamiseka kuba ishishini elitshonileyo libangele ukulahlekelwa yimali okanye kwabakho izityholo zobuqhetseba. Abanye baye basa abazalwana babo enkundleni kodwa iBhayibhile isinceda sibone ukuba kubhetele silahlekelwe kunokuba igama likaThixo lirhuqwe eludakeni okanye kuphazamiseke uxolo lwebandla.  Sifanele sisebenzise umyalelo kaYesu ukuze silungise iingxaki okanye ukungavani phakathi kwethu. (Funda uMateyu 5:23, 24; 18:15-17.) Xa sisenza oko, sincedisa ekugcineni umanyano phakathi kwabantu bakaYehova.
16. Kutheni sinokulindela ukuba abantu bakaThixo bamanyane?
16 IBhayibhile iyasichazela ukuba kutheni sinokulindela ukuba abantu bakaThixo bamanyane. Umdumisi wathi: “Khangela! Hayi indlela ekulunge nekuthandeka ngayo ukuba abazalwana bahlale ndawonye ngomanyano!” (INdu. 133:1) AmaSirayeli ayelungelelana yaye amanyane xa ethobela uYehova. Echaza oko kwakuza kwenzeka ebantwini bakhe kwixesha elizayo, uThixo wathi: “Ndiya kubabeka bemanyene, njengomhlambi ebuhlanti.” (Mika 2:12) Ngaphezu koko, esebenzisa umprofeti uZefaniya, uYehova waprofeta wathi: “Izizwana ndiya kuzinika ukuba zitshintshele kulwimi olusulungekileyo, ukuze zonke zibize egameni likaYehova, ukuze zimkhonze ngaxhatha linye.” (Zef. 3:9) Sivuya nyhani kuba sikhonza uYehova kunye simanyene!
Abadala bazama ukunceda umntu ophume endleleni (Jonga isiqendu 17)
17. Ukuze ibandla lihlale limanyene kwaye licocekile, abadala bafanele bawachophele njani amatyala?
17 Ukuze ibandla lihlale limanyene kwaye licocekile, abadala bamele bakhawulezise ukuwachophela amatyala baze bakwenze oko ngothando. UPawulos wayesazi ukuba uthando lukaThixo asiyomvakalelo nje yaye akabaqwabazel’ iliso abenzi bubi. (IMize. 15:3) Ngenxa yoko, uPawulos zange oyike ukubhala eyokuQala KwabaseKorinte, ileta eyayingqalile kwangaxeshanye ibhalwe ngothando. EyesiBini KwabaseKorinte, eyabhalwa kwiinyanga ezimbalwa kamva, ibonisa ukuba kwabakho utshintsho ngenxa yokuba abadala babethobele ulwalathiso lukaPawulos. Ukuba umKristu uqalisa ukuphuma endleleni yaye akakayiqondi loo nto, amadoda amiselweyo afanele azame ukumnceda ngomoya wobulali.—Gal. 6:1.
18. (a) Iziluleko eziseBhayibhileni zawanceda njani amabandla enkulugwane yokuqala? (b) Liza kuthetha ngantoni inqaku elilandelayo?
18 Kucacile ukuba, ngenkulugwane yokuqala, iziluleko eziseBhayibhileni eziphefumlelweyo zawanceda amaKristu aseKorinte namanye akwezinye iindawo ukuze akwazi ukugcina ibandla licocekile, liseluxolweni yaye limanyene. (1 Kor. 1:10; Efe. 4:11-13; 1 Pet. 3:8) Ngenxa yoko, abazalwana noodade baloo mihla bakwazi ukwenza okuninzi kumsebenzi wokushumayela. UPawulos wakwazi nokuthi iindaba ezilungileyo ‘zazishunyayelwe kwindalo yonke ephantsi kwezulu.’ (Kol. 1:23) Kwimihla yethu, ulwazi ngeenjongo zikaThixo lusasazwa emhlabeni wonke, ngenxa yemigudu yabo basebenza kunye bemanyene kwintlangano enye. Inqaku elilandelayo liza kuthetha ngobungqina obungakumbi bokuba aba basebenzi bayayixabisa iBhayibhile yaye bazimisele ukuthobela iNkosi enguMongami uYehova.—INdu. 71:15, 16.
^  (isiqendu 13) Jonga incwadi ethi Ukwenza Ukuthanda KukaYehova Ngolungelelwano, iphe. 134-136.
^  (isiqendu 15) Ukuze ufumane inkcazelo malunga neemeko apho umKristu esenokugqiba ekubeni ase omnye enkundleni, jonga umbhalo osemazantsi kwincwadi ethi “Zigcineni Kuthando LukaThixo,” iphe. 223.